हेर्दा सामान्य लाग्ने रिडि बजारको यो फोटो किन मानियो दुर्लभ ! - RuruNetwork
रुरुनेटवर्क संवाददाता २ माघ २०७५, बुधबार १६:१० मा प्रकाशित
रिडि, माघ२। यो फोटो हेर्दै गर्दा धेरै लाई लाग्न सक्छ, सामान्य दिनमा खिचिएको सामान्य फोटो हो, यहाँ दुर्लभ शब्दको के अर्थ? तर यथार्थ दुर्लभ नै हो। फोटो आज माघ २ गते दिउँसो २ बजेर १५ मिनट जाँदा खिचिएको हो। आज माघेसंक्रान्ती मेलाको दोश्रो दिन अर्थात रिडिमा #माइली_संक्रान्ती, जिबनको आज सम्मको माघे संक्रान्ती मेलाको काल खण्डमा रिडि बजारको मुख्य भागमा यस्तो तस्बिर खिच्न पाउनु सायद दुर्लभ अबसर नै हो जस्तो हामी लाई लागेको छ। आखिर यहा त्यस्तो भयो केे त !
हुन्थ्यो यस्तो मेलाको तिनै दिन रिडि बजार तिर्थ यात्रीहरुले भरिभराउ। हिड्डा पनि अरु मन्छे संग ठोकिएला जस्तो। बिगतमा तपाईंहरु पनि मेलामा रिडि आउनु भएको भए त्यो दिनहरुको दृश्य स्मृतिमा होला।
भयो कसरी यस्तो?
अब तपाईंहरु लाई लाग्न सक्छ सायद यश पटकको रिडि मेलामा निकै कम मानिसहरु गएछ्न, अथवा कोहि पनि जाँदै गएनन! होइन यथार्थ यो पनि होइन। हिजोकै रुरु नेटवर्क समाचार को रिपोर्टमा “रिडिमा दशौं हजार तिर्थ यात्रीले डुबुल्की लगाए रिडि कालिमा” भनेर समाचार सम्प्रेस गरेको, हिजोको आज कसरी हुन सक्थ्यो यस्तो! आज दिनभरको तिर्थ यात्रीहरुको आगमनको आँकडा हेर्ने हो भने हिजोको तुलनामा अझ धेरै तिर्थ यात्रीहरु रिडि आएका छन। मेला लाग्ने क्षेत्र बगर तिर्थ यात्रीहरुको भिडले दिनभर भरिभराउ थियो।
तर पनि रिडि बजारको यस्तो दृश्य किन?
एउटा जमाना थियो रिडिमा, जति बेला तीन दिनको माघेसंक्रान्ति मेलाको ब्यापारले बर्ष भरी लाई खान लाउन पुग्ने गर्थ्यो रे। बाउबाजेको पालाको यो यथार्थ अझ पनि त्यो बेलाका रिडिका बुढापाकाहरु सुनाउने गर्दछन। तर त्यो बेलाको यथार्थ अहिले आएर कुनै काहानि जस्तो बनेको छ। धेरै पहिले देशका विभिन्न कुनाका मानिसहरु हप्ता दिन हिडेरै रिडि मेलामा आउने गर्थे। यातायातको सुबिधा थिएन। यसरी आउने यात्रीहरुमा व्यापारी निकै कम संख्यामा अर्थात औंलामा गन्न सकिने संख्या मात्र हुन्थ्ये भने तिर्थ यात्रीको संख्या अनगिन्ती। यातायातको सुबिधा नहुदा टाढा बाट आउने अधिकांश तिर्थ यात्रीहरु कम्तिमा पनि १ देखि २ दिन रिडिमै वास बस्ने गर्थे। मेलामा आउने तिर्थयात्रीहरुको उद्देश्य तिर्थाटन मात्र नभइ आफू संग बिक्री गर्न योग्य सामान भए बेच्ने र आफू लाई आबश्यक सामाग्री भए मेलाको अबसरमा किन्ने हुन्थ्यो।
तर समयले कोल्टे फेर्दै जाने र आधुनिक सेवा सुबिधाको बिकास हुने क्रममा यातायातको सुबिधा देशभर उपलब्ध हुन थाल्यो। रिडि बाट कोसौं दुर रहेका ब्यक्तिहरु एक दिनमै रिडि आउन र सोही दिनमै फर्कन सक्ने भए। सबै किसिमकस सेवा सुबिधाहरु यातायातको बिस्तार संगै सर्वत्र उपलब्ध छ। बस्तु तथा सेवाहरु खरिद/ बिक्रीका लागि कुनै मेला कुरिरहन पर्ने अबस्थाको अन्त्य हुन थालेको छ। यसैको प्रभाव अहिले रिडि मेलाको ब्यबसायिक करोबारमा देखिन थालेको छ।
रिडि मेलामा एका तर्फ ब्यबसायिक कारोबारमा कमि आउन थालेको छ भने अर्को तर्फ बिगत केही बर्ष देखि मेलाको अबसरमा व्यापार गर्नका लागि सयौंको संख्यामा देशका विभिन्न स्थान बाट (रिडि बाहिरका) ब्यापारिहरु आउन थालेका छन। तिनिहरुले रिडि बजारका ब्यापारीहरुले बिक्री गर्ने सामाग्री भन्दा सस्तो मुल्यको सामाग्रीहरु प्रसस्त बिक्री गर्ने गर्दछन। त्यसैले उपभोक्ताहरु यस्ता ब्यापारिक बस्तु तर्फ आकर्शित हुने क्रमले रिडि बजार क्षेत्रको ब्यबसायमा मेलाको समयमा मन्दी छाउन थालेको छ। यसको असर यश वर्ष निकै देखिएको छ रिडिमा। मेला लाग्ने बगर क्षेत्रमा दशौ हजार मानिसहरुको जमघट हुँदा पनि रिडि बजार भने सुनसान भएको छ। माघे संक्रान्ती तिनदिनको व्यापार गरेर बर्ष भर लाई पुगाउने त्यो जमानाको व्यापार अहिले उल्टो भएको छ। रिडिका ब्यपारिहरुका लागि यो तीन दिन सायद बर्षभरको सबै भन्दा कम व्यापार हुने दिनमा परिणत भएको छ।
हेर्नुहोस आजको रिडि बजारको तस्बिर: